YouTube Playlist မှ Video အားလုံးကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
YouTube Playlist မှ Video အားလုံးကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ ?
Ko Thuya Jun 12, 2018
YouTube မှာ သင် နှစ်သက်တဲ့ သီချင်း ဗီဒီယို Playlist များ အပြင် ဘာသာစကား သင်ကြားခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Playlist များမှ ဗီဒီယိုများ အားလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်သူများအတွက် အခုဖော်ပြမယ့် Apps များက အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။
၁။ 4K Video Downloader
4K Video Downloader ကို Windows, Mac, Linux တို့အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူက Playlist တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ရုံ သာမက ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် Channels တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ Channels မှာ အသစ်တင်တဲ့ ဗီဒီယိုများကို အလိုအလျှောက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 3D နဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုများကိုတောင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူက ဗီဒီယိုများအတွက် Subtitles များကိုပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တာက ထူးခြားပါတယ်။ ဗီဒီယိုများ၊ Playlist များကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် YouTube Link ကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ သူက Vimeo, Facebook, Dailymotion တို့မှ ဗီဒီယိုများကိုပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။
၂။ Gihosoft TubeGet
Gihosoft TubeGet က YouTube , Facebook, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Break, Veoh, Blip.tv အပါအ၀င် ဗီဒီယို ၀က်ဆိုက်ပေါင်း ၁၀ ၀၀၀ ကျော်မှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူက ဗီဒီယို တစ်ခုတည်းသာမက Playlist တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဗီဒီယို URL ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ MP4, WebM, 3GP, FLV, AVI, or MKV စတဲ့ ဖော်မက်များနဲ့ 4K, 1440P, 1080P, 720P, 480P, 360P, or 240P စတဲ့ အရည်အသွေးများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သူက ဗီဒီယို ၅ ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကို မထိခိုက်စေဖို့ သူ့မှာ အမြန်နှုန်းကို ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။
MegaVN.com ကိုတော့ ဘရောက်စာကနေသာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ YouTube Video များကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ ၀က်ဆိုက်များစွာ ရှိပေမယ့် Playlist တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ ၀က်ဆိုက်ကတော့ ရှားပါးပါတယ်။ MegaVN.com က အဲဒီ ရှားပါး ၀က်ဆိုက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ Playlist/Channel Tab ထဲသွားပြီး လင့်ကို ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှာပါ။
သူ့မှာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းရည်များလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူဟာ 4K Downloader လိုပဲ YouTube Channel တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုများကို Proxy ခံ၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ စွမ်းရည်က အသုံးဝင်ပါတယ်။
KeepVid ကို Windows, Mac အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူက YouTube, Facebook , Instagram လို လူမှုကွန်ရက်များ၊ CBS, ABC လို သတင်း ၀က်ဆိုက်များ၊ SoundCloud, Mixcloud လို သီချင်း ၀က်ဆိုက်များ အပါအ၀င် ၀က်ဆိုက်ပေါင်း ၂၈ ခုကျော်ကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။ KeepVid ကို ဖွင့်ပြီး ဗီဒီယို လင့်ကို ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ဗီဒီိယို သို့မဟုတ် Playlist တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။
KeepVid ကို ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြင့် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အခြား ၀န်ဆောင်မှုများမှာ မပါတဲ့ ၀က်ဆိုက်များကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။
YouTube Playlist မှ Video အားလုံးကို ဘယျလို Download လုပျမလဲ ?
YouTube မှာ သငျ နှဈသကျတဲ့ သီခငျြး ဗီဒီယို Playlist မြား အပွငျ ဘာသာစကား သငျကွားခွငျး၊ ခရီးသှားခွငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ Playlist မြားမှ ဗီဒီယိုမြား အားလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျခငျြသူမြားအတှကျ အခုဖျောပွမယျ့ Apps မြားက အလှနျ အသုံးဝငျပါတယျ။
4K Video Downloader ကို Windows, Mac, Linux တို့အတှကျ ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။ သူက Playlist တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးနိုငျရုံ သာမက ခလုတျတဈခကျြနှိပျလိုကျရုံဖွငျ့ Channels တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးပါတယျ။ Channels မှာ အသဈတငျတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို အလိုအလြှောကျ ဒေါငျးလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။ 3D နဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုမြားကိုတောငျ ဒေါငျးလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။
သူက ဗီဒီယိုမြားအတှကျ Subtitles မြားကိုပါ ဒေါငျးလုပျလုပျပေးနိုငျတာက ထူးခွားပါတယျ။ ဗီဒီယိုမြား၊ Playlist မြားကို ဒေါငျးလုပျလုပျဖို့အတှကျ YouTube Link ကို ထညျ့ပေးလိုကျရုံပါပဲ။ သူက Vimeo, Facebook, Dailymotion တို့မှ ဗီဒီယိုမြားကိုပါ ဒေါငျးလုပျလုပျပေးပါတယျ။
Gihosoft TubeGet က YouTube , Facebook, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Break, Veoh, Blip.tv အပါအဝငျ ဗီဒီယို ဝကျဆိုကျပေါငျး ၁၀ ၀၀၀ ကြျောမှ ဗီဒီယိုမြားကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ သူက ဗီဒီယို တဈခုတညျးသာမက Playlist တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးပါတယျ။ ဗီဒီယို URL ကို ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ ဒေါငျးလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။
ဒေါငျးလုပျလုပျတဲ့ အခါမှာ MP4, WebM, 3GP, FLV, AVI, or MKV စတဲ့ ဖျောမကျမြားနဲ့ 4K, 1440P, 1080P, 720P, 480P, 360P, or 240P စတဲ့ အရညျအသှေးမြားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ သူက ဗီဒီယို ၅ ခုကို တဈပွိုငျနကျ ဒေါငျးလုပျလုပျပေးပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အငျတာနကျ အသုံးပွုမှုကို မထိခိုကျစဖေို့ သူ့မှာ အမွနျနှုနျးကို ကနျ့သတျနိုငျပါတယျ။
MegaVN.com ကိုတော့ ဘရောကျစာကနသော အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ YouTube Video မြားကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးတဲ့ ဝကျဆိုကျမြားစှာ ရှိပမေယျ့ Playlist တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးတဲ့ ဝကျဆိုကျကတော့ ရှားပါးပါတယျ။ MegaVN.com က အဲဒီ ရှားပါး ဝကျဆိုကျမြားထဲမှ တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဝကျဆိုကျရဲ့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှ Playlist/Channel Tab ထဲသှားပွီး လငျ့ကို ထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ ဒေါငျးလုပျလုပျရမှာပါ။
သူ့မှာ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ စှမျးရညျမြားလညျး ရှိနပေါတယျ။ သူဟာ 4K Downloader လိုပဲ YouTube Channel တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ နိုငျငံကနျ့သတျခကျြရှိတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို Proxy ခံ၍ ဒေါငျးလုပျလုပျပေးတဲ့ စှမျးရညျက အသုံးဝငျပါတယျ။
KeepVid ကို Windows, Mac အတှကျ ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။ သူက YouTube, Facebook , Instagram လို လူမှုကှနျရကျမြား၊ CBS, ABC လို သတငျး ဝကျဆိုကျမြား၊ SoundCloud, Mixcloud လို သီခငျြး ဝကျဆိုကျမြား အပါအဝငျ ဝကျဆိုကျပေါငျး ၂၈ ခုကြျောကို ထောကျပံ့ပါတယျ။ KeepVid ကို ဖှငျ့ပွီး ဗီဒီယို လငျ့ကို ထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ ဗီဒီယို သို့မဟုတျ Playlist တဈခုလုံးကို ဒေါငျးလုပျလုပျပေးပါတယျ။
KeepVid ကို ဒျေါလာ ၃၀ ဖွငျ့ ဝယျယူ အသုံးပွုရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့မှာ အခွား ဝနျဆောငျမှုမြားမှာ မပါတဲ့ ဝကျဆိုကျမြားကို ထောကျပံ့ပါတယျ။
Lenovo က ပါးလွှာတဲ့ ဂိမ်း လက်ပ်တော့များကို ကြေညာ
အရှေ့ကင်မရာအတွက် Portrait Mode ပါလာတဲ့ OnePlus6ရဲ့ OxygenOS 5.1.6 ကို ဖြန့်ချီပြီ